Our Range - Etagtron, Inc.
Momba an'i Etagtron
Box azo antoka
Etagtron dia mpamatsy vahaolana vaovao nanolo-tena hanampy ny mpivarotra hivoatra.
Manolotra elanelam-pikarohana mihitatra amin'ny RF izy ary matetika tsy dia mora tohina amin'ny fitsabahan'ny elektronika ivelany. Ny AM dia matetika no hita amin'ny fivarotana fitafiana lehibe, fivarotana lehibe, fivarotana DIY, fivarotana elektronika ary mpivarotra fivarotam-panafody. ny fonosany.
RF dia mifanentana tanteraka amin'ireo mpivarotra amina vokatra marobe fonosana noho ny fahamoran'ny mari-pametaka sy fisaka. Izany no mahatonga ny RF ho rafitry ny safidy ho an'ny fivarotana lehibe, fivarotana fihenam-bidy, mpahay simia ary fivarotana horonan-tsary. Ny rafitra EAS mankany RFID dia midika fa nitombo tato ho ato ny fivarotana fitafiana.
Ny teknolojia RFID dia mandeha ho azy ny fanangonana angon-drakitra ary mampihena be ny ezaka sy ny lesoka ataon'ny olombelona.
RFID dia manohana marika RFID marobe amin'ny famakiana fa tsy mila scan-na-maso na item-by-item, manome fitomboan'ny fahombiazany.
Ny tag RFID rehetra ao anaty elanelany dia ho tsikaritra eo noho eo ary hifanaraka amin'ny fampahalalana ao amin'ny angon-drakitrao.
Ny fananana dia azo jerena amin'ny alàlan'ny toerana voatondro ary voarakitra an'izao, tsy hita, na nafindra toerana.
RFID dia afaka ampidirina amin'ny scanning mavitrika sy ny mpamaky raikitra ho an'ny vahaolana mandeha ho azy tanteraka.
Mpivarotra isan-karazany isan-karazany - ao anatin'izany ny fivarotana lehibe maro maneran-tany, fivarotana lehibe ary fivarotana zava-mahadomelina - efa mampiasa ESL, ny tombony azo avy amin'ny Dynamic Centralized Pricing, In-Store Heat-Mapping, Automated Inventory Management.
Manantena ny ...
Adress:RM101, valan-javaboary Yuzhou, No.3409 Jinghong Road, Distrikan'i Minhang, Shanghai (201108)
Telefaona:0086 21 64953088-826
© Copyright - 2010-2021 Etagtron, Inc.: Zo rehetra voatokana.